Vanessa no nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana tany Toamasina. Omaly vao maraina be no hita ny vatana mangatsiakany tao amin’ny lalan-kely iray ao amin’ny fokontany Mangarivotra-Atsimo Toamasina. Nahitana lavaka vokatry dian’antsy teo amin’ny lohan’ity tovovavy ity sy ny teo ambanin’ny sofiny havanana. Mangana ihany koa ny tendany. Nosaromana harona sachet plastika sy lamba notazomina tamin’ny fehin-kibo ny lohany taorian’izany. Raha araka ny fantatra anefa dia avy any Fenoarivo Atsinanana Itompokovavy. Fialonana moa raha araka ny tombana no antony namonoana ity tovovavy ity. Tena tsara tarehy mantsy izy hoy ny loharanom-baovao ary niditra tao amina efitrano fandihizana iray tao Ankirihiry, ny alin’ny talata nifoha omaly Alarobia. Nisy andian’olona tao amin’ilay efitrano fandihizana anefa no tsy nahatanty izany hatsaran-tarehin’i Vanessa hoy hatrany ny vaovao ka mety izay no namonoan’ny sasany azy. Ny fanadihadian’ny mpitandro ny filaminana ihany moa no tena hanamarina izany.